Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Maleeshiyada Hargeysa oo Weerartay Goob uu Ku Sugna Madaxweynaha Khaatumo
Jan 14, 2016 SOMALI NEWS 1
Harowo – Ciidamo aad u hubeesan oo katirsan Maamulka Somaliland ayaa lagu soo waramayaa in ay la wareegeen Deegaanka Balli-cad oo qiyaastii 80-km kaga aadan dhanka galbeed magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool , halkaas oo la filayay in uu Shir uga furmo Madaxda Maamulka Khaatumo.
Wararka aan heleyno ayaa sheeaya in Ciidamada Somaliland ay weerar ku qaadeen Tuuladan oo ay kasocotay qaban qaabada shir maalinta berito halkaasi ka furmi lahaa, waxaana Shirkaasi ka qeyb gali lahaa deegaankaasina ku sugnaa Madaxweynaha Khaatumo Prof Cali Khaliif Glaeyr.
Dagaal ayaa lagu soo waramaya in ay dhax mareen Ciidamada maamulka Somaliland ee weeraray deegaanka Balli-Cad iyo ciidamo ka amar qaata maamulka Somailand, walina si dhab ah looma oga qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Dadka Deegaanka ayaa ku waramaya in Ciidamada Somaliland ay la wareegeen Tuulada Balli-Cad halkaasina ay isaga tageen Madaxdii Maamulka Khaatumo State ee ku sugneed uuna kamid ahaa Madaxweynaha Maamulkaasi Cali Khaliif.
Madaxweynaha Khaatumo iyo Xubno kale oo la socday ayaa la sheegay in ay u baxeen Dhinaca Xaduudka ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, waxaana hada maamula gacantana ku haya Deegaanka Balli-cad Ciidamadii Somaliland ee weeraray.
Maamulka Somaliland ayaa marar badan dagaal ku qaaday Goobo uu ku sugnaa Madaxweynaha Khaatumo State Cali Khaliif Glaeyr, waxaana horey looga saaray Madaxweyne Galeyr Deegaanka Saaxdheer oo aheed halkii lagu caleemo saarayay .
Ciidamada Somaliland, Maamulka Somaliland, Madaxda Maamulka Khaatumo, Maleeshiyada Hargeysa
Daawo Dagaal Xoog ah oo Godoomiye Xigeenka Gobolka Salal Loogu Xoog Sheegtay Dhulkiisa Feedhna Dhulka Loogu Riday Audio:- Labo Haween oo Kasoo Jeeda Hargeysa oo Khalkhaliyay Shirkii Kismaayo
Daawo:- Sheekh Aadan Siiro oo Ku Dhawaaqay Jihaad ka Dhan Ah Maamulka Kililka...
One thought on “Maleeshiyada Hargeysa oo Weerartay Goob uu Ku Sugna Madaxweynaha Khaatumo”
Gorof 01/14/2016 at 6:15 pm
U nageeya niman aan waxaad tihiin aqoon oo gun idiin yaqaan. Madaxweyne Riyaale markuu tegay Laas caanoood rasaas oodda kaga qaadeen iyagoo leh “uf oo akhas! Waar haddee ma anaa huuno Laaska igu xukuntaa?”
Siilaanyona wuu u xaar tagaa Laascaanood ilaa Gambadhe oo hablo u ciyaareey usoo diraan.
Galaydhkan aad isku dhejineysaan tolkii Darrood buu u gacan haadiyay. Idinkana tolkiin Dir dumis mooyee wax kale uma haysaan.